Cricbuzz - Live Cricket Scores & News 4.5.015 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.5.015 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား အားကစားမ်ား Cricbuzz - Live Cricket Scores & News
Cricbuzz - Live Cricket Scores & News ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
The best Cricket App to follow Live Cricket and everything else related to Cricket 🏏
🎬 Exclusive video content and match highlights videos in some countries
🏏ခရစ်ကက်မှတိုက်ရိုက်ခရစ်ကက်နှင့်အခြားအရာအားလုံးဆက်စပ်နောက်လိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးခရစ်ကက် App ကို
⚡️ Superfast ရမှတ်များနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်
💬 Highly ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်ဖျော်ဖြေမှုဘောလုံးကို-by-ဘောလုံးကိုဝေဖန်သုံးသပ်ချက်
📈အဆင့်, Stats ကတော့နှင့်မှတ်တမ်း
ICC ကခရစ်ကက်ကမ္ဘာ့ဖလား, T20 ကမ္ဘာ့ဖလား, ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလား, IPL စသည်တို့ကဲ့သို့အဓိကပြိုင်ပွဲများအတွက်🏆အထူးအကြောင်းအရာ
အားလုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပုရစ်၏🌍ကျယ်ပြန့်လွှမ်းခြုံ, IPL, BBL, CPL, Natwest T20 ပေါက်ကွဲမှုနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ကအခြားအဓိကပုရစ်ပြိုင်ပွဲ။ အရမ်းပြည်တွင်းပုရစ်လွှမ်းခြုံတန်ချိန်။
- တိုက်ရိုက်ရမှတ် updates များကို
- သင် action ကိုမြင်ယောင်အထောက်အကူပြုဘောလုံးကိုဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကဘောလုံး
- Harsha Bhogle နှင့်အခြားပုရစ်ကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်သုံးသပ်ခြင်း
- သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူရမှတ် Share
- ရမှတ် widget က
- အားလုံးနောက်ဆုံးပေါ်အဖြစ်အပျက်၏ In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
- Harsha Bhogle နှင့်အခြားသူများအားဖြင့်အပတ်စဉ်ဆောင်းပါးများ
- ပွဲစဉ်များနှင့်စီးရီးကြည့်ရှုနိုင်သော, သုံးသပ်ချက်များ, ဓာတ်ပုံကိုပြခန်းစသည်တို့
- ကို select လုပ်ပါနိုင်ငံများတွင်ကို select လုပ်ပါပွဲများအတွက်ဗီဒီယိုပျေါလှငျ
- Harsha Bhogle နေဖြင့်သီးသန့်ဗီဒီယိုများ
- အားလုံးလာမည့်နှင့်မကြာသေးခင်ကပွဲစဉ်အသေးစိတ် In-တိုးတက်မှု, Live
- အားလုံးလာမည့် bi-lateral စီးရီးများနှင့်ပြိုင်ပွဲများအတွက်အချိန်ဇယားများ
- အားလုံးပုရစ်၏မော်ကွန်းကျော 1950 ယ့်ကိုက်ညီ
- ICC က Player နဲ့အဖွဲ့အဆင့် ODIs အဘို့, စမ်းသပ်မှုများနှင့် T20Is
Cricbuzz App ကိုသငျသညျအောကျပါအဘို့အခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံစေခြင်းငှါ
ငါတို့သည်သင်တို့ app ကို အသုံးပြု. အခါဒေသအလိုက်ပုံရိပ်တွေနဲ့တူအချို့သောဒေတာသိုလှောင်ရန်ဤလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒေတာ uage minimize နှင့်လည်းအတွေ့အကြုံအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အရည်လုပ်ကူညီပေးသည်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုတုန့်ပြန်ချက်ကိုပေးပို့ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ Gmail ကို Id populate ဤလိုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာ curate သင် App ကိုအချို့ကဏ္ဍများကိုအပေါ်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပြရန်ဤလိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ: မူလစာမျက်နှာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကိုက်ညီမှု, ဗီဒီယိုများ, သတင်းစသည်တို့ကို။ ငါတို့သည်လည်းကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဤသုံးပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအိန္ဒိယဘာသာစကားများအတွက်ပုရစ်ကိုလိုက်နာဖို့လိုပါလျှင် (ဟိန္ဒူ, တမီး, ကန်နာဒါ, ဂု, မာရသီနှင့်ဘင်္ဂါလီလက်ရှိထောက်ခံကြသည်), ကျွန်တော်တို့ရဲ့ App ကိုထုတ်စစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီး Cricbuzz - အိန္ဒိယဘာသာစကားများခုနှစ်တွင် Google တွင် Play
Cricbuzz - Live Cricket Scores & News အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Cricbuzz - Live Cricket Scores & News အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Cricbuzz - Live Cricket Scores & News အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Cricbuzz - Live Cricket Scores & News အား အခ်က္ျပပါ
nithingowda စတိုး 396 132.19k
Cricbuzz - Live Cricket Scores & News ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Cricbuzz - Live Cricket Scores & News အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.5.015
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.cricbuzz.com/info/privacy
App Name: Cricbuzz - Live Cricket Scores & News
Release date: 2019-08-29 03:11:40
လက်မှတ် SHA1: 58:21:10:62:36:8B:C5:5C:9F:10:7D:C4:04:81:6B:D6:04:BB:42:DB
ထုတ်လုပ်သူ (CN): pravin
အဖွဲ့အစည်း (O): cricbuzz
နယ်မြေ (L): bangalore
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): karnataka
Cricbuzz - Live Cricket Scores & News APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ